Mividy fanapahana | Manafatra zavamaniry an-trano tsy fahita firy sy tsy manam-paharoa - Taratasy fanapahana
Tolotra fetin'ny reny 2022
Zavamaniry an-trano tsy fahita firy
Eurobangers fifanarahana fifanarahana
Terrarium & zavamaniry zaridaina tavoahangy
Tapaka sy zavamaniry maimaim-poana
Zavamaniry fanadiovana rivotra
Shrubs sy kirihitra
Zonal Geranium mahitsy
Accessories amin'ny zavamaniry
Vacancy: Mpanome entana, mpanangom-bokatra
Fanomezana fampiroboroboana tany am-boalohany
Torohevitra 5 momba ny fotoana hahatongavan'ny fanapahanao amin'ny fanapahanao
Alocasia: zavamaniry an-trano tsara tarehy sy miavaka
Famerenana ny zavamaniry an-trano
Zavamaniry an-trano tsotra 5
zavamaniry an-trano lehibe
Inona ny haben'ny vilany voninkazo ilaiko?
Zavamaniry an-trano 5 mora
Top 10 fironana trano fambolena
Torohevitra 10 momba ny fikarakarana zavamaniry ao an-trano
Zavamaniry an-trano 10 mahasoa ho an'ny ankizy
Ny fironana amin'ny zavamaniry an-trano
Ny fikarakarana tsara indrindra ho an'ny zavamaniry an-trano
Ny bibikely ao an-tranoko!
Philodendron - fiaviana sy toro-hevitra momba ny fikarakarana
fibra voanio; ny tany famafazana, fanapahana ary famafazana tsara indrindra
Torohevitra amin'ny volana Desambra - fanontana Krismasy
Hazo krismasy nivoaka, zavamaniry an-trano amin'ny 2021
Vonjeo! Ravina mavo amin'ny zavamaniry ao an-tranoko
Mpanjifa ve ianao sa mpamboly?
Taratasy fanapahana gazety
Misoratra anarana amin'ny gazetiboky
Fanontana farany an'ny Cutting Letter
Houseplants ny volana
Ny lisitra tiako
Monstera Variegata tanora manapaka
Handray ny fanamby amin'ny fanapahana tsy miorim-paka tsy fahita firy ve ianao? †
Eny Mazava ho azy!
Syngonium Albo. eo ho eo fanapahana
Fanomezana mahafinaritra ho an'ny tenanao na ho an'ny malalanao? †
Gaga ny malalanao amin'ity Fetin'ny mpifankatia ity miaraka amin'ny MP
Monstera Variegata - Young cutting!
Daredevil amin'ity fanamby an-tanàn-dehibe maitso ity!?
Eny, sahiko, tazomy ho velona izy! †
Ny Philodendron Cobra dia zavamaniry tsy fahita firy ary miavaka noho ny raviny manokana misy loko maro samihafa.
Philodendron Burle Marx Variegata tsy miorim-paka
Philodendron Burle Marx Variegata dia Philodendron tsy fahita firy miaraka amin'ny raviny tsara tarehy.
Tena tianao ve ny hampifaly ny vadinao na ny sipanao amin'ny Pilea Mojito?
ENY AZA ATAO!
Tapaka amin'ny sphagnum moss
Drafitra tsikelikely: fanapahana amin'ny sphagnum moss ho an'ny vao manomboka
TondrozotraMividiana moss sphagnum tsy misy bakteria
Tsy voatery ho lafo be amintsika ny surprise
Satria tsy misy mahafinaritra kokoa noho ny gaga fotsiny!
Surprise fanapahana boaty miorim-paka 5 pcsSurprise fanapahana boaty unrooted 4 pcs
Fanomezana ara-barotra maharitra?
Misaotra ireo mpiara-miasa malalanao amin'ny fanomezanay asa maitso avy any an-trano!
Boaty fanapahana mahagagaFampahalalana bebe kokoa?
Gaga ny namanao akaiky indrindra?
Alefaso izy Hoya Kerri Double Hearts miaraka amin'ny karatra fiarahabana!
Hoya Kerry fo roakaratra fiarahabana
Avy amin'ny mpankafy zavamaniry any Aostralia ka hatramin'ny mpanangona zavamaniry any Holandy
Ataovy ho ala tanàn-dehibe tsara tarehy!
Raiso ny zavamaniry nofinofinao rehetra amin'ny alàlan'ny boaty taratasy!
SOSO-KEVITRA FANOMEZANA: RENY
Ahoana no gaga reny ao an-trano na lavitra amin`ny fomba tany am-boalohany?
boaty surpriseVilany rouge rouge
Fangaro manapaka ho an'ny fanapahanao rehetra
Ampiasao ity premium mix cutting ity mba hanomezana fanombohana tsara ny zana-ketsa.
Perlite 10 L ho an'ny fanapahanao
Atombohy amin'ny perlite ny dianao manapaka!
Anthurium Crystallinum fanapahana faka
Te quiro, tiako ny Anthurium Crystallinium!
PWP Andriambavy €21.95
Nanontany ianao dia nihaino izahay :)
9 x Zavamaniry maitso ho fanomezana ho azy ny andron'ny mpifankatia
Tapaka sy zavamaniry malaza misesy
Fandefasana maimaim-poana amin'ny baiko mihoatra ny €94,95 [NL]
Ho avy tsy ho ela, mpikarakara tokantrano
Fividianana sy fikarakarana Alocasia Frydek Variegata
Alocasia Frydek Variegata dia zavamaniry tsy fahita firy sy tsara tarehy. Manana loko maitso mavana be izy io, mitovitovy amin'ny sehatra sy karazany, ary raviny miendrika fo tery misy lalan-dra fotsy mifanohitra. Ny halavan'ny petiole dia miankina amin'ny habetsahan'ny hazavana omenao ny zavamaniry. Ilaina ny hazavana mba hitazonana ny alokaloka.
Ny Alocasia dia tia rano ary tia ao anaty hazavana…
Vidio ny Philodendron Melanochrysum
Philodendron melanochrysum dia karazana zavamaniry mamony ao amin'ny fianakaviana Araceae. Ity Philodendron manokana sy manaitra ity dia tena tsy fahita firy ary fantatra amin'ny anarana hoe Black Gold.
Mividy Philodendron Melanochrysum hitetika tsy miorim-paka
tolotra, mpikarakara tokantrano
Mividy Syngonium Red Spot Tricolor fanapahana
Apetraho amin'ny toerana maivana ny zavamaniry, fa tsy amin'ny tara-masoandro mivantana. Raha maizina loatra ny zavamaniry dia ho maitso ny ravina.
Tazony ho mando kely ny tany; aza avela ho maina ny tany. Tsara kokoa ny manondraka rano kely tsy tapaka toy izay manondraka betsaka indray mandeha. Ny ravina mavo dia midika hoe be loatra ny rano omena.
Ny Pixie dia tia mitsimoka amin'ny fahavaratra!
Mividy Monstera adansonii variegata – vilany 12 sm
Ny Monstera adansonii variegata, fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe 'zavamaniry lavaka' na 'philodendron monkey mask' variegata, dia zavamaniry tsy fahita firy sy miavaka noho ny raviny manokana misy loaka. Io zavamaniry io koa dia manana ny anaram-bositra. Tany am-boalohany dia maniry any amin'ny ala tropikaly any Amerika Atsimo sy Afovoany ny Monstera obliqua.
Apetraho amin'ny toerana mafana sy maivana ny zavamaniry ary…
tolotra, Fifanarahana zoma mainty 2022
Monstera obliqua adansonii variegata – fanapahan-doha tsy miorim-paka
Ny Monstera obliqua variegata, fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe 'zavamaniry lavaka' na 'philodendron monkey mask' variegata, dia zavamaniry tsy fahita firy sy miavaka noho ny raviny manokana misy lavaka. Io zavamaniry io koa dia manana ny anaram-bositra. Tany am-boalohany dia maniry any amin'ny ala tropikaly any Amerika Atsimo sy Afovoany ny Monstera obliqua.
Mividy Monstera adansonii variegated – vilany 13 cm
Monstera adansonii variegata - mividy tapa-kazo tsy misy fotony
Monstera Dubia mividy sy mikarakara ireo tapa-kazo tsy misy fotony
Ny Monstera dubia dia karazana Monstera tsy dia fahita firy, tsy dia fantatra loatra noho ny Monstera deliciosa na Monstera adansonii, saingy ny fiovaovany tsara tarehy sy ny fahazarana mahaliana dia mahatonga azy io ho fanampiny fanampiny amin'ny fanangonana zavamaniry rehetra.
Ao amin'ny toerana nahaterahany any Amerika Afovoany sy Atsimo tropikaly, Monstera dubia dia voaloboka mandady izay mianika hazo sy zavamaniry lehibe. Ny zavamaniry tanora dia miavaka amin'ny…
Monstera albo borsigiana variegata - mividy tapa-kazo tanora
De Monstera Variegata dia tsy isalasalana fa ny zavamaniry malaza indrindra amin'ny taona 2021. Noho ny lazany dia zara raha mahazaka ny fitakiana ny mpamboly. Ny ravina tsara tarehy amin'ny Monstera dia tsy haingon-trano fotsiny, fa zavamaniry fanadiovana rivotra ihany koa. Ao Shina, ny Monstera dia maneho ny faharetana. Mora ny mikarakara ny zavamaniry ary azo ambolena ao amin'ny…
mpikarakara tokantrano, zavamaniry kely
Vidio ny Syngonium Podophyllum Albo Variegata
tolotra, Ho avy tsy ho ela
Mividiana sy mikarakara Syngonium Red Spot Tricolor
Mividiana sy mikarakara ny fanapahana Syngonium Green Splash
Ny syngonium dia tia mitsimoka amin'ny fahavaratra!
Midira ao amin'ny Syngonium…
Monstera adansonii laniata hitetika tsy misy fotony amidy
Ny fanapahana tsy misy fakany Monstera adansonii laniata, fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe 'zavamaniry lavaka' na 'saron-tava rajako philodendron', dia manokana. fototra noho ny raviny manokana misy loaka. Io zavamaniry io koa dia manana ny anaram-bositra. Tany am-boalohany dia maniry any amin'ny ala tropikaly ny Monstera adansonii laniata Amerika Atsimo sy Afovoany.
Apetraho amin'ny toerana mafana sy maivana ny zavamaniry…
Monstera albo borsigiana variegata - fanapahan-doha miorim-paka
De Monstera Variegata dia tsy isalasalana fa ny zavamaniry malaza indrindra amin'ny taona 2019. Noho ny lazany dia zara raha mahazaka ny fitakiana ny mpamboly. Ny ravin'ny Monstera tsara tarehy philodendron dia tsy haingon-trano fotsiny fa zavamaniry fanadiovana rivotra ihany koa. In Shina ny Monstera dia maneho ny fiainana lava. Mora ny mikarakara ny zavamaniry…
Vidio Syngonium Albo variegata semimoon fanapahana tsy miorim-paka
Syngonium Podophyllum Albomarginata tapaka tsy miorim-paka
Syngonium Podophyllum Albo Variegata tsy miorim-paka
Monstera albo borsigiana variegata - fanapahana miorim-paka
Monstera albo borsigiana variegata - fanapahana tanora
De Monstera Variegata dia tsy isalasalana fa ny zavamaniry malaza indrindra amin'ny taona 2021. Noho ny lazany dia zara raha mahazaka ny fitakiana ny mpamboly. Ny ravin'ny Monstera tsara tarehy philodendron dia tsy haingon-trano fotsiny fa zavamaniry fanadiovana rivotra ihany koa. In Shina ny Monstera dia maneho ny fiainana lava. Mora ny mikarakara ny zavamaniry…
Mividiana sy mikarakara Syngonium Green Splash
Vidio Rhapidophora tetrasperma minima variegata fanapahana
Taorian'ny ady nifanaovana tao amin'ny tranokala lavanty iray any Nouvelle-Zélande, dia nisy olona nividy an'io zavamaniry io tamin'ny raviny 9 monja tamin'ny $19.297. Orinasa Rhaphidophora Tetrasperma Variegata, antsoina koa hoe Monstera Minima variegata, no namidy vao haingana tamin'ny lavanty an-tserasera. Nitondra $19.297 mangatsiatsiaka izy io, ka nahatonga azy ho “zavamaniry an-trano lafo indrindra” tao amin'ny tranokalam-pivarotana varotra…
Vidio ny Syngonium Red Heart tsy misy fakany
Vidio sy karakarao ny fanapahana gilasy voaroy Syngonium
Vidio ny Syngonium Pink Splash hitetika tsy miorim-paka
Tapaka sy zavamaniry maimaim-poana, mpikarakara tokantrano
Zavamaniry rantsantanana - Mividiana tapa-kazo miorim-paka amin'ny Fatsia japonica
Ny Fatsia Japonica dia fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Fatsia Japonica ary toa manondro ny anarany, ity zavamaniry ity dia avy amin'ny ala hafahafa any Japana. Satria ny ravina dia manana endrika tanana amin'ny rantsantanana, ny anarana holandey dia tsy adala voafidy. Ny Finger Plant dia anisan'ny fianakaviana ivy ary mora azo…
Ny zavamaniry mosaika (Fittonia) dia zava-maniry kely maniry avy amin'ny Amerika Atsimo (Pero)† 'Kely, nefa be herim-po' dia azo antsoina hoe Fittonia. Hatramin'ny nampidirana azy tamin'ny fararano 2007, maherin'ny 100.000 no efa namidy. izany zavamaniry mosaika, araka ny iantsoana azy koa hoe Fittonia, dia miakatra zara raha dimy santimetatra ambonin'ny sisin'ny vilany. Saingy toa fantany…
Fifanarahana zoma mainty 2022, mpikarakara tokantrano
Fittonia albivensis Mosaic Plant Ravina Mena
Ny zavamaniry mosaika (Fittonia) dia zava-maniry kely maniry avy amin'ny Amerika Atsimo (Pero)† 'Kely, nefa be herim-po' dia azo antsoina hoe Fittonia Mosaic Kings Cross. Hatramin'ny nampidirana azy tamin'ny fararano 2007, maherin'ny 100.000 no efa namidy. izany zavamaniry mosaika, araka ny iantsoana azy koa hoe Fittonia, dia miakatra zara raha dimy santimetatra ambonin'ny sisin'ny vilany. Saingy toa...
Te hahafantatra ny zavatra niainan'ny mpanjifanay sasany
Serivisy ambony sy fanaterana haingana
[EN] Fandefasana haingana, ary zavamaniry tsara tarehy sy mahasalama! Na dia nijanona tao amin'ny PostNL nandritra ny faran'ny herinandro iray manontolo aza izy ireo, dia mbola tsara tarehy izy ireo, voafono tsara ary namandoana tsara ny tany. Recommended!
Mahagaga sy voakarakara tsara ny zavamaniry
[BE] Ny kaomako voalohany tonga tany Belzika tao anatin'ny andro vitsivitsy. Fonosana tena tsara, nipoitra avy tao anaty boaty tsy simba ny tapa-kazo sy ny zavamaniry. Mendrika averina, misaotra!
Tena manoro hevitra ny Cutting Letter aho!
Fanaterana ririnina haingana ao anatin'izany ny heatpack mankany Italia
[IT] Nanafatra ny voliko avy any Italia nandritra ny ririnina, tonga haingana ireo zavamaniry ary voafono tsara ao anatin'izany ny fonosana hafanana! Vidiny tena tsara ary koa valiny haingana avy amin'ny serivisy mpanjifa. Tena manoro an'ity fivarotana ity aho!
Tonga soa aman-tsara tany Alemaina ny zavamaniry rehetra
[DE] Tonga feno entana daholo ny zavamaniry tao an-tranoko na dia taorian'ny fahatarana 4 andro tamin'ny fanasokajiana PostNL sy 4 andro tao amin'ny serivisy paositra Alemana. Misaotra betsaka amin'ny entanao tsara sy ny serivisy fanaraha-maso mahafinaritra!
Misaotra betsaka amin'ny fandefasana haingana any Frantsa
[FR] Afaka manamarina anao aho fa nahazo ny Princess Philodendron Pink tsy nisy olana aho. Misaotra betsaka anao tamin'ity fandefasana haingana tany Frantsa ity!
Tena afaka manoro hevitra an'i SB aho!
Tena feno entana any Aotrisy
[AU] Tonga soa aman-tsara tamiko ny zava-maniry, ary tena feno tsara ilay fonosana ary tena tsara ny zava-maniry! Misaotra betsaka amin'ny zavatra rehetra! Ary hametrahako 100% indray ny baiko any aminao!
Mandefa ny taratasy Stekjes (Vaovao) indray mandeha isam-bolana izahay :-)
Adiresy mailaka: Namaky sy manaiky ny fepetra sy fepetra aho
Avelao ho banga ity saha ity raha olombelona ianao:
Ireto ny bilaoginay vao haingana
Fanamboaran-tany sy fonon-tany
Ahoana ny fampiasana perlite hanatsara ny tany sy hamporisihana ny fitomboan'ny zavamaniry
Inona no atao hoe perlite? « Rivotra ho an’ny tany » no dikany, ary io no fomba faharoa tsara indrindra amin’ny fanaovana zezika sy fanatsarana ny firafitry ny tany. Mahazoa toro-hevitra azo ampiharina momba ny fampiasana perlite amin'ny fomba mahomby amin'ny zaridainanao.
Soso-kevitra 5 momba ny fotoana hahatongavan'ny fanapahanao eo amin'ny fanapahanao Mety ho fantatrao fa tonga ao an-tranonao ihany ny fanapahanao rehefa avy nandeha lavitra. Omeo vilany izy ireo, omenao a Hamaky bebe kokoa…
Vonjeo! Ravina mavo eo amin'ny zavamaniry ao an-tranoko Ankafizinao tanteraka ny zavamaniry maitso ao an-tranonao, saingy avy eo… tampoka dia mahita ravina mavo ianao! Inona no dikan'izany ary inona no azonao atao momba izany? Mety ho antony maromaro izany Hamaky bebe kokoa…
Drafitra tsikelikely: manapaka amin'ny fifangaroan'ny perlite sy sphagnum moss
Drafitr'asa: manapaka amin'ny fifangaroan'ny perlite sy sphagnum moss. Toa mora tokoa izany, ary izany dia raha manaraka ny dingana mety ianao ary manana fitaovana mety. Hamaky bebe kokoa…
Drafitra manaraka: Ahoana ny fomba hamonjena monstera variegata amin'ny fakany
Drafitra tsikelikely: Mitahiry tapa-kazo avy amin'ny lo ny fakany Mety hitranga fotsiny izany: miala amin'ny fanapahana monstera variegata tsara tarehy miaraka amin'ny fakany malala-tanana ianao, mankany amin'ny raviny mampalahelo misy sisa tavela amin'ny fakany ao anatin'ny herinandro vitsivitsy. Tena tsy faly Hamaky bebe kokoa…
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny fambolena frezy
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny fambolena frezy dia efa akaiky eto! Ary iza no tsy tia frezy amin'ny fahavaratra. Na tsara kokoa aza, iza no tsy tia ny vaovao Hamaky bebe kokoa…
Inona no haben'ny vilany voninkazo ilaiko ho an'ny zavamaniry ao an-tranoko?
Inona no haben'ny vilany voninkazo ilaiko ho an'ny zavamaniry ao an-tranoko? Rehefa mividy zavamaniry dia zava-dehibe ny mividy ny vilany voninkazo mety mifanaraka amin'ny karazana zavamaniry novidinao. Anarana Hamaky bebe kokoa…
Soso-kevitra 5: SOS, sahirana ny orinasako!
Soso-kevitra 5: SOS, sahirana ny orinasako! Fantatrao ve izany? Mandeha mangina mandalo ny orinasanao ianao, mitodika any aoriana, ary tampoka dia BAM! Mihantona toy ny hoe efa nilaozan’ny fiainana izy. Angamba misalasala Hamaky bebe kokoa…
Drafitra tsikelikely: fanapahana amin'ny perlite ho an'ny vao manomboka
Drafitra tsikelikely: fanapahana amin'ny perlite ho an'ny vao manomboka. Toa mora tokoa izany, ary izany dia raha manaraka ny dingana mety ianao ary manana fitaovana mety. Hazavainay ato amin'ity lahatsoratra ity Hamaky bebe kokoa…
Drafitra an-dàlambe: Philodendron Verrucosum
Drafitr'asa manaraka: Fanamboarana philodendron an-trano Ny fananana zavamaniry ao an-tranonao dia fomba mahafinaritra hitondrana zavaboary ao an-tranonao. Indraindray dia mety ho lasa be loatra izy ireo, saingy tsy midika izany fa afaka mahazo azy avy hatrany ianao Hamaky bebe kokoa…
Pests part 2: Caplice sy whiteflies
Pests part 2: Taolana sy lalitra Fotsy Loha ao anatiny Ny moka miparitaka amin'ny alalan'ny: biby fiompy, rivotra, fitafiana, vorona sy bibikely simba eny! fitafiana, vorona Hamaky bebe kokoa…
Drafitra miandalana: manapaka amin'ny moss sphagnum ho an'ny vao manomboka. Toa mora tokoa izany, ary izany dia raha manaraka ny dingana mety ianao ary manana fitaovana mety. Apetraho amin'ity lahatsoratra ity Hamaky bebe kokoa…
Plan-by-dingana: Ny fanapahana amin'ny rano ho an'ny vao manomboka
Plan-by-dingana: fanapahana amin'ny rano ho an'ny vao manomboka. Toa mora tokoa izany, ary izany dia raha manaraka ny dingana mety ianao ary manana fitaovana mety. Apetraho amin'ity lahatsoratra ity Hamaky bebe kokoa…
Drafitr'asa: Tapahana ao anaty boaty fanaparitahana ho an'ireo vao manomboka
Tapaka ao anaty “boaty fanaparitahana” ho an'ireo vao manomboka. Matetika izany dia midika hoe hamandoana avo sy Hamaky bebe kokoa…
Torohevitra 10 - Fikarakarana zavamaniry ao an-trano amin'ny fahavaratra
Toro-hevitra 10 – Fikarakarana zavamaniry ao an-trano amin'ny fahavaratra Mihodinkodina ny fahavaratra ary miakatra ny mari-pana. Mafana ho anay izany, fa koa ho an'ny zavamaniry ao an-tranonao. In Hamaky bebe kokoa…
Mila fanazavana fanampiny momba anay ve ianao?
Ny toerana misy anay
STEKJESLETTER.NL (Tsidiho amin'ny fotoana voatondro ihany) Wilgenroos 11, 2391 EV Hazerswoude-Dorp, NL
Alefaso mailaka izahay
Alefaso aminay hafatra LiveChat
Fanohanana varotra 24/7 LiveChat
tonga lafatra / Carte de crédit / Paypal / Apple Pay / ING Home'Pay / bancontact / KBC - CBC / Belfius Direct Net / Banky SOFORT / Giropay / EPS / Famindrana 24
Ny adiresy mailakao (takina)
Manaraka anay amin'ny Instagram ve ianao
Eny! Fantatra amin'ny mpitia zavamaniry izy ho iray amin'ireo
Jereo ity Babydoll Green Homalomena Emerald Gem o
Ahoana ny amin'ny fikarakarana an'ity zazavavy kely antsoina hoe Red Secre ity
Mitady ny gi Paska maharitra tsara indrindra ve ianao
Ny Rare Monstera Siltepecana tsy miorim-paka dia manana
Ny Philodendron Florida Ghost dia tsy fahita firy
TANTARA FAHOMBIAZANA - Ny fizarana dia mikarakara Ph
Ny Crassula Pyramidalis dia Crassula tsara tarehy
Ny Dracaena, antsoina koa hoe Dragon Tree, dia bec
Ny iray amin'ireo faniriana indrindra Syngonium amin'izao fotoana izao dia
Tena zavamaniry tsy fahita firy amin'ny alocasia rehetra !!! EFA
Ny Peperomia Caperata dia trano mahafinaritra sy miloko
Hampiditra bebe kokoa… Araho ao amin'ny Instagram
by taratasy manapaka 3 volana lasa izay
Efa nahita zavamaniry tsy fahita firy toa an'ity Lady Pink Painted ity ve ianao? Philodendron Painted -Pink - Lady dia a
Ny Platycerium dia antsoina matetika hoe Staghorn na Elkhorn Fern (Holandey: Hertshoorn fern) noho ny raviny mahagaga, miavaka, miendrika tandroka. izy ireo
Ny zavamaniry epipremnum pinnatum dia teratany any amin'ny faritra maro maneran-tany, toa an'i Shina, Taiwan, Japon, India, Malezia, Aostralia Avaratra, na ny
Tillandsia - fantatra amin'ny anarana hoe fiaramanidina, hita any amin'ny ala mikitroka, ala tropikaly na tany efitra ireo fahalianana botanika ireo.
Anthurium Clarinervium - Babygal, ahoana izany ry cutie!? Ny Anthurium clarinervium dia manana lamina mampitolagaga amin'ny lehibe, matevina,
Moa ve ianao mijaly noho ny bibikely mafy loha ao an-trano? Well Pokon Bio miady amin'ny bibikely mafy loha Polysect Spray miady a
Ny sampana Mitsumata dia mijery tsara ao anaty vazy lava na miaraka amin'ny voninkazo maina. Afaka manao betsaka indrindra ianao
Fantatrao ve fa rehefa tapitra ny voninkazo ny orkide na ny phalaenopsis dia azonao atao ny mamporisika azy hamony indray.
Ny Peperomia Caperata dia zavamaniry an-trano mahafinaritra sy miloko izay tsy mitombo mihoatra ny 20 santimetatra. Ireo fananana ireo dia midika
Tena zavamaniry tsy fahita firy amin'ny alocasia rehetra !!! Alocasia Scalprum dia manana ravina matevina sy fingotra miaraka amin'ny venation be pitsiny, izay ny
Ny iray amin'ireo maniry indrindra Syngonium amin'izao fotoana izao dia azo antoka fa ny tricolor mena mena
Ny Dracaena, antsoina koa hoe Dragon Tree, dia miha-malaza ary mbola karazana zavamaniry tsara tarehy. Ny zavamaniry
Ny Crassula Pyramidalis dia karazana Crassula tsara tarehy misy raviny tsara. Mifanakaiky be ireo ary manome
by taratasy manapaka 2 volana lasa izay
TANTARA FAHOMBIAZANA - Ny fizarana dia fikarakarana ravin-jaza mahafatifaty Philodendron Florida Ghost izay manome fifaliana sy fahatokisana be dia be.
Ny Philodendron Florida Ghost dia tsy zavamaniry trano tsy fahita firy hanangonana, fa ravinkazo mahavariana toy ny
Ny Rare Monstera Siltepecana tsy miorim-paka dia manana ravina volafotsy tsara tarehy miaraka amin'ny ravinkazo maitso matroka. Tonga lafatra amin'ny fanantonana vilany na
Mitady fanomezana Paska maharitra tsara indrindra hanaitra ny mpiara-miasa aminao ve ianao? Avy eo ity fifanarahana fonosana fanomezana Paska ity dia
by taratasy manapaka 1 volana lasa izay
Ahoana ny amin'ny fikarakarana an'ity zazavavy kely antsoina hoe Red Secret an'ny fianakaviana Alocasia ity? Ny tsiambaratelo mena dia mila tany maloto tsara, miantoka izany
by taratasy manapaka 4 herinandro lasa izay
Jereo ity saribakoly maitso maitso Homalomena Emerald Vatosoa ity. Tsy zazakely mahafatifaty fotsiny ve izy mba hokarakaraina? ny
by taratasy manapaka 2 andro lasa izay
Eny! Izy dia fantatra amin'ny mpamboly ho iray amin'ireo Alocasia tsara tarehy indrindra amin'ity zavamaniry ity
Araho koa izahay amin'ny media sosialy
Miorina amin'ny fanavaozana 86
Serivisy mpanjifa tsara !!!
Tsara 🪴🪴 livraison haingana ary mazava ho azy fa voafono tsara, serivisy tsara, valiny haingana amin'ny fanontaniako. Tena manoro hevitra
Nahazo fanapahana tsara tarehy, tena faly tamin'izany!
Iray volana lasa izay dia nividy Syngonium Mottled sy Syngonium variegata aho teto. Raha oharina amin'ny maro hafa... mora kokoa ireo tranonkala ireo. Tonga soa aman-tsara izy ireo ary tena nanao tsara hatramin’izay. Tena faly tamin'izany!hamaky bebe kokoa
Nametraka ny baiko voalohany aho tamin'ity herinandro ity. Natahotra aho sao tsy ho tonga ara-potoana, fa rehefa nifandray tamin'ny... webshop dia nanome toky ahy izy ireo fa halefa haingana ny baiko ary tonga izany! Nahazo ny baiko aho tao anatin'ny roa andro ary ny fanapahana dia mbola tsara kokoa noho ny noheveriko! Nahafinaritra ihany koa ny fifandraisana tamin'ny tranokala web. Tena hanafatra eto matetika aho!hamaky bebe kokoa
Vao avy nahazo ny baiko aho tamin'ny Syngonium Green Splash. Tena zava-maniry mahafinaritra. Ny marika amin'ny ravina dia mbola tsara kokoa... amin'ny tena fiainana dia ny fomba fijerin'izy ireo ny sary ao amin'ny tranokala. Tena faly mpanjifahamaky bebe kokoa
Serivisy lehibe! Tonga haingana dia haingana ny baiko ary voafono tsara! Ary mahagaga fa efa tao anaty a... siny 👌🏻hamaky bebe kokoa
Tena faly aho fa nahita ny fivarotany rehefa nitety zavamaniry manokana aho. Nividy ireto tena tsara aho... zavamaniry avy amin'izy ireo ary tena afa-po amin'ny serivisy aho. Nilamina tsara ny zavamaniry ary tena feno entana. Nanampy Anthurium kely fanampiny izy ireo satria ilay novidiko dia tsy nisy afa-tsy ravina telo. Mamy io fihetsika io ary nahatonga ahy hahatsapa fa tena manome lanja ny mpanjifany izy ireo. Taorian'ny nividianako dia nahita ny tenako nitety ireo zavamaniry maro kokoa tao amin'ny tranokalany aho. Mora nohatonina sy nampiantrano koa ny tompony. Tena mahafinaritra ny manao resaka sariaka sy feno eritreritra.hamaky bebe kokoa
serivisy tena tsara sy haingana. lehibe noho ny nantenaina ny lomano. tena manoro hevitra !!
Ny tsy fifankahazoana amin'ny fanaterana, voavaha ao anatin'ny iray andro. Top! Tsara kalitao ary naterina haingana.
Nividy vermiculite. Vokatra tsara hanombohana zavamaniry ho an'ny lohataona/fahavaratra. Fandefasana haingana. Fonosana madio. aho... faly aho! Misaotra anao Cutieletter!hamaky bebe kokoa
Tonga tamin'ny toe-javatra tsara tarehy ilay zavamaniry! Livraison tsara sady haingana😍
Nanantena zavamaniry 40 sm aho, tsy misy frites 40 metatra misy blister XNUMX sm 😇 fa tsy henonao ny fitarainako !!... Tena faly aho tamin'izanyhamaky bebe kokoa
Tena soso-kevitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Hampahafantarina anao hatrany amin'ny fikarakarana ka hatramin'ny fandefasana. Ny maripana dia... malefaka fa tonga ny hafanana mba hahazoana antoka. Livraison ny ampitso! Nilamina sy nilamina tsara ny zava-drehetra. Noho izany dia tonga tsara ny zava-drehetra! Ny zavamaniry dia mijery tsara sy salama! Recommended! Mandra-pahatongan'ny manaraka!hamaky bebe kokoa
Traikefa tena mahafinaritra, olona tena tsara sy manampy! Jereo tsara rehefa afaka 1 volana ny fandehan'ny zavamaniry, ary... tena tsara izany. Tsy nandeha tsara ny lomano, ary nifanaiky izahay fa haka iray miaraka amin'ny baiko manaraka, dia izay. Ary nahagaga ahy fa nahazo tapa-kazo 2 aho!hamaky bebe kokoa
Experience voalohany tena mahafinaritra. Feno hipoka ny orinasako ary tonga soa aman-tsara. Azo antoka fa tsy ity no farany... fotoana aho manafatra eto.hamaky bebe kokoa
Nametraka ny baiko voalohany. Voaray tsara ny zavamaniry. Na dia eo aza ny fahatarana amin'ny fanaterana dia mbola salama ary... zavamaniry sambatra! hamaky bebe kokoa
Tena faly tamin'ny andriambavy fotsy philodendron ahy naterina tsara sy haingana
Nametraka baiko teto voalohany tamin'ny tranokala tsy fantatro. Ary wow tsara ny zava-drehetra... miaraka! Haingana be ny fikarakarana ny kaomandy ary voafono tsara. Raha tsy mahafeno ny fepetra takian'izy ireo ny entana novidina dia tsy halefa izany. Super! Tena afa-po! Tena hanafatra eto indray aho! Misaotra anao!hamaky bebe kokoa
Vao haingana aho no nanafatra teto ary mbola mandeha tsara ny zavamaniry :) Tena tsara ny serivisy... . Nisy zava-maniry iray tonga simba ary naverina fotsiny!hamaky bebe kokoa
Nanafatra philodendron Verrucosum vao haingana, zavamaniry tiako indrindra 🥰 tara be ny fandefasana ka nanahy aho... mampanahy ny sasany fa soa ihany fa tena feno entana! Noho izany, rehefa afaka 4 andro lava kokoa noho ny nokasaina ho ao anaty boaty iray, dia nisy zavamaniry feno tsara tarehy nipoitra. Tena faly aho, ary hita mibaribary ao an-tranoko izany 🥰hamaky bebe kokoa
Tena traikefa! Haingana be ny livraison ary tonga tao anatin'ny toe-javatra tsy misy idiran'ny ratra ny tapahina. Ny olona ao amin'ny Cutting letter dia... tena tsara be koa! tena manoro hevitra! †hamaky bebe kokoa
Nahazo zavamaniry tena tsara. Nanana fanontaniana maromaro mialoha aho, ary tena sariaka sy haingana mamaly aho... nitsangana. Tena soso-kevitra tokoa! hamaky bebe kokoa
Zavamaniry voafantina tsara tsy hitanao mora amin'ny fivarotana zaridaina mahazatra. Tonga haingana ireo zavamaniry nasaiko... ary nofonosina tsara. Manao commande aloha fa tena hanao commande indray rehefa mila maintso hafa manodidina ny trano!😄hamaky bebe kokoa
Serivisy mpanjifa tena tsara! Tena manoro ity fivarotana ity.
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia nanafatra Philodendronwhiteprincess tao amin'ny fivarotanao an-tserasera aho. Tonga tamin'ny toe-javatra tsara tany Alemaina izy io... ary tena mpitsikilo kely izy…🪴🤩 tsara ny zava-maniry ary efa mitady hatsarana kely vaovao ao amin'ny fivarotanao aho :) asa tsara ianao! Miarahaba avy any Alemainahamaky bebe kokoa
Vao avy nanao commande, tonga aloha noho ny nandrasana. Surprise fanampiny mahafinaritra, fenoina tsara!
Manafatra fanindroany eto. Zavamaniry tsara fonosina sy tsara tarehy!
Spagnum moss nasaina, voafono tsara ary nalefa haingana!
Nahazo zavamaniry tsara tarehy avy amin'ny Cuttingsbrief aho. Na dia naharitra ela aza ny fandefasana ny iraka dia tonga ny orinasa... tsara tarehy ary tamin'ny farany dia nandeha tsara ny zava-drehetra. Feno hipoka tanteraka ilay zavamaniry. Tena tsara fanahy sy matihanina ny fifandraisana amin'ny mpivarotra. Tena eshop tsara indrindra fantatro.💚☺hamaky bebe kokoa
Ity tranonkala ity dia azo antoka! Tonga feno entana sy tao anatin'ny toe-javatra tsara ny zavamaniry. Ankoatra izany, ny... Serivisy mpanjifa tena tsara, valiny haingana sy sariaka. Amin'ny ankapobeny dia tranonkala tsara sy mahafinaritra izay tsy misy itarainana momba izany!hamaky bebe kokoa
Stwkysbrief dia zavamaniry avo lenta sy fikarakarana mpanjifa tsara fanahy. Tena ankafiziko ny zavamaniry tsy fahita firy amin'ny vidiny mora... vidiny sy ny vilany tsy manam-paharoa. Ciao avy any Italia.hamaky bebe kokoa
Eny, tena azo antoka! Efa nanafatra ny PWP aho dia niditra tamin'ny fifaninanana sary ary nahazo ny andriambavy mavokely 🥳 . ho anio... tonga tamin'ny toe-javatra tena tsara izy ireo ary tena faly aho 👌🤗🤗hamaky bebe kokoa
Naterina haingana dia haingana sy manokana ny baiko. Misaotra anao
Fandefasana haingana be! Nofonosina tamim-pitandremana ireo zavamaniry ary tao anatin'ny toe-javatra tsara. Hatreto aloha dia ity no voalohany... baiko avy amin'ity tranokala ity ary azoko antoka fa tsy ho farany aho. Manoro hevitra tanteraka izany! hamaky bebe kokoa
nahazo andriambavy fotsy philodendron tena tsara miaraka amin'ny ravina 2 antsasaky ny volana sy ravina vaovao. Indrisy, ravina... Nivadika volontsôkôlà tokoa izany, saingy heveriko fa mety noho ny hamandoana ao an-trano izany. (40%)hamaky bebe kokoa
Tena matihanina, serivisy mpanjifa mahavariana ary tonga ara-potoana sy amin'ny toe-javatra tonga lafatra ny zava-drehetra! Manoro hevitra tanteraka... izanyhamaky bebe kokoa
Serivisy haingana sy milamina, be dia be ny safidy ny zavamaniry sy ny toy izany
Tena manampy amin'ny serivisy mpanjifa feno. Tonga haingana be ny baiko ary tao anatin'ny toe-javatra tsara. Tena afa-po ary hiverina tsy ho ela... manafatra indray mandeha!hamaky bebe kokoa
Nanana traikefa momba ny serivisy mpanjifa tsara indrindra aho tamin'ity fivarotana ity. Tsy namaly fotsiny ny fanontaniako tamin'ny hafainganam-pandeha maivana i Steffie... fa nampiany firenena hafa ho ahy koa izy ho safidy amin'ny fandefasana rehefa nanontany aho. Steffie misaotra anao amin'izany! Ny zavamaniry dia ao anatin'ny toe-javatra tsara ary efa mitifitra ravina vaovao. Nangonina tsara ny zava-drehetra ary misy safidy ny manampy fonosana hafanana ihany koa izay zava-dehibe mandritra ny volana ririnina. Manoro hevitra fotsiny aho fa tsy manondraka be loatra mandritra ny ririnina fa mety hanimba ny zavamaniry raha tsy misy fonosana mafana ary handrakotra ny tany tsara kokoa mba tsy hivoaka ny vilany (tena kely izany fa ny fonosana dia nandeha an-tongotra roa. firenena ary tsy azo atao ny mifehy ny fomba fitondran'ny iraka). Fanomezana tsy nampoizina ho an'ny anabaviko ireo zavamaniry ary tsy nisy safidy hanafatra ho an'ny firenena nipetrahako tamin'izany fotoana izany. Misaotra an'i Steffie afaka manafatra zavatra ho an'ny tenako aho izao :) Manana karazana zavamaniry tena tsara amin'ny habe isan-karazany sy amin'ny vidiny tsara izy ireo. Nitady princess philo fotsy sy mavokely indrindra aho ary samy manana izy ireo. Ary koa monsteras isan-karazany, hitetika ary zavamaniry variegated. Ny zavamaniry dia tena salama ary efa maniry ravina vaovao. Tsy nisy fahatarana ny fandefasana entana ary nahazo mailaka misy fanavaozana avy amin'ny fivarotana aho. Tena faly aho ary indrindra amin'ny serivisy mpanjifany mahafinaritra!hamaky bebe kokoa
Nandray commande ny alahady teo. Ny zoma no nanaterana azy ireo. Ny zavamaniry dia toa tsara tarehy sy salama!
Nanafatra indroa ary tena faly tamin'izy roa. Fandefasana haingana, valiny mahafinaritra ary tsara tarehy... Vokatra.hamaky bebe kokoa
Tolotra super spécial ary tena lafo. Haingana ny fandefasana ary tsara kokoa sy lehibe kokoa noho ny nantenaina ny zavamaniry! tena... faly tamin'ny fividianako ary tena hanafatra indray aho.hamaky bebe kokoa
Fandefasana haingana ary fonosina tsara! Tena faly aho tamin'ny baiko ary azo antoka fa hanafatra indray amin'ny ho avy!
Tena gaga ny hatsaran'ireo tapa-kazo sy zavamaniry kely ireo, somary lehibe kokoa noho ny nantenaiko ary... Efa nametraka baiko faharoa aho. Fifandraisana tsara amin'ny mpivarotra, vidiny tena ara-drariny ary mazava be ny fitiavana ny zavamaniry.hamaky bebe kokoa
Misaotra noho ireo zavamaniry mahafinaritra. Misaotra an'i Mega noho ny loka tsara navela hahazoako (Philodendron... Pinnatipartita, Philedenderon Minima, Hoya Kerri). Tiako ny fanompoanao sy ny fomba ifandraisanao. Nanomboka tamin'ny fifandraisana tamin'ny mailaka izany, satria nangatsiaka be ny tany ivelany herinandro vitsy lasa izay, nandefa mailaka anao aho raha te handefa ny andriambavy fotsy aho rehefa somary tsara kokoa ny andro. Nahazo valiny tsara aho momba izany. Nahafinaritra ny fifandraisana tamin'ny alàlan'ny Instagram momba ireo zavamaniry nahazo fandresena. Endrey ny olona tsara ampiasainao. Raha fintinina dia fantatro hoe aiza no hividianako ny tapa-kazo sy ny zavamaniry amin'ny ho avy. Misaotra indrindra amin'ny zavatra rehetra. Miampy 10 lehibe ho an'ny serivisy mahafinaritra anao, ireo zavamaniry tsara tarehy, fifandraisana ary mazava ho azy ireo olona tena mamy miasa ho anao.hamaky bebe kokoa
Nandeha araka ny nampanantenaina ny zava-drehetra ary tonga tao anatin'ny toe-javatra tsara ny zavamaniry! Tena hanafatra indray.
Nanomboka nanapaka ny zavamaniry aho tamin'ny volana Novambra, ary haingana dia nahazo olana tamin'ny fikorianan'ny holatra tsy misy farany. Taorian'ny ahy... Mba hamahana ny olana mahaleo tena tamin'ny voalohany, dia niaiky ihany aho tamin'ny farany ny fahavoazako nandritra ny onja moka fahatelo/fahaefatra ary avy eo dia nanome baiko ny Pokon hanohitra ny bibikely maditra. Ny vokatra dia nanafatra ny alahady maraina, ary tsy nampoizina tanteraka no tonga nandritra ny tolakandro. Avy hatrany dia nandefa ny counterattack, ary nanomboka teo dia tsy nahita moka velona. Fanaterana ambony! Tokony ho nataoko haingana kokoa. Cuttings letter dia misy fanapahana mahaliana ary mahafinaritra ny fifandraisana / fanaterana, ka hiverina aho.hamaky bebe kokoa
plug vaovao aho. Tamin'ny fanapahana taratasy dia nanafatra ny boaty fanapahana monstera miorim-paka aho. Haingana sy milamina... fanaterana. Ny hany tiako ho toy ny plug novice dia raha toa ka nasiana marika ny zavamaniry ary nisy fanazavana kely momba ny fikarakarana ny zavamaniry. Na izany aza, mbola nampiana tsara aho tamin'ny fanapahana taratasy tamin'ny alàlan'ny Instagram.hamaky bebe kokoa
Zavamaniry tena tsara tarehy sy salama! Fonosana tsara ary ny livraison sy ny serivisy dia ambony ihany koa 👌🏼. Tena tsara tarehy... karazana zavamaniry amin'ny vidiny mirary! Mpankafy aho ary tia tanteraka ny andriambavy fotsy philodendron 🥰!hamaky bebe kokoa
Serivisy tena tsara! Nandray commande tamin'ny alarobia ary efa naterina ny alakamisy! Nofonosina tamim-pitandremana ny fanapahana ka izany... azo antoka fa tsy ho simba teny an-dalana. Ary ny fanapahana mihitsy dia toa tsara be!hamaky bebe kokoa
Nividy an'ity Monstera Variegata ity aho tao amin'ny Stekjesbrief. Tena lehibe sy salama. Nofonosina tsara ilay izy ary tonga... soa aman-tsara. Nalefa tamin'ny talata alina izany, nahazo track sy trace aho ary naterina tany Danemark ny zoma atoandro ny ozinina. Tena manoro hevitra an'i Stekjesbrief aho, tena tsara izy ireo tamin'ny fanomezana torohevitra sy serivisy mpanjifa lehibe. Hividy zavamaniry aminao indray aho.hamaky bebe kokoa
vilany mahafatifaty sy zava-maniry tsara tarehy.tsara fahatongavana.recommended!tena hanafatra indray.
Nahazo zavamaniry sy zavamaniry tena tsara! Tena feno entana ihany koa, tonga tsara toy ny tsy simba ny zavamaniry... ao anatiny (na dia ao anatin'ireny hafanana mangatsiaka aza) Tena afa-po! Hanafatra indray tsy ho ela!hamaky bebe kokoa
Tena tsara! Nila spagnum haingana araka izay azo atao aho, nanondro izany koa aho, ary saika avy hatrany taorian'ny fandoavana... Nahazo valiny aho fa ny oakket dia hiala amin'io andro io ihany mba ho tonga alohan'ny faran'ny herinandro! Ary tafita! :D namonjy ny voliko io ka faly aho :) ny fifandraisana sy ny fanaovana dia tena mora sy mahafinaritra!hamaky bebe kokoa
Ity fivarotana zavamaniry ity ihany no azoko ambara! Ny zava-maniry dia fonosina tsara sy amim-pitandremana. Tsara kalitao ihany koa.... Fa ny tena tiako indrindra dia ny olona ao ambadiky ny orinasa: fifandraisana mahafinaritra ary eo foana ho anao! Fan! Tena manoro an'ity fivarotana ity aho! Ny zavamaniry dia feno fikarakarana, ary tsara tarehy sy tsara kalitao. Fa ny tiako indrindra dia ny olona ao ambadiky ny fivarotana: tena tsara sy sariaka ary vonona hanampy foana! A+++hamaky bebe kokoa
Nividy ny monstera variegata aho teto. Tonga tsara!!! Rehefa afaka andro vitsivitsy dia efa nanao vaovao izy... splash 😍 Serivisy super!hamaky bebe kokoa
Zavamaniry sariaka sy tsara tarehy amin'ny vidiny tsara ary fonosina tsara foana! Recommended!
Nanafatra zavamaniry 3 avy any Italia aho. Tonga haingana izy ireo ary voafono tsara. Vidiny tena tsara sy valiny haingana. soso-kevitra... :)hamaky bebe kokoa
Mbola tena velona miaraka amin'ny zava-manitro tsara tarehy. Serivisy lehibe koa! Tena mpivarotra mahafinaritra! Tena soso-kevitra
Karazana tsara sy livraison haingana! Serivisy mpanjifa haingana sy mahafinaritra!
Tiako ity fivarotana ity. Ny olona tsara fanahy indrindra hatramin'izay. Ao anatin'ny fihomehezana sy fifampiresahana foana ary manana vidiny marina ho azy ireo... zavamaniry. Tena fantatrao fa ao anatin'izany izy ireo noho ny fitiavana zavamaniry. Manao livraison manokana koa izy ireo indraindray eto Holandy 🥰.hamaky bebe kokoa
Nahazo zavamaniry tsara tarehy sy tapa-kazo ny alarobia lasa teo. Tena tsara fonosana ary ny serivisy dia ambony indrindra!... Tena soso-kevitra ho an'ireo izay mitady hitetika faran'izay tsara ihany koa! Na izany na tsy izany dia hanafatra amin'ny Stekjesbrief matetika kokoa aho.hamaky bebe kokoa
Faly be aho amin'izay novidiko teto. Tonga soa aman-tsara sy voafono tsara ireo zavamaniry. ny... Ny tahan'ny vidiny sy ny kalitao dia tsara. Betsaka ny tolotra. Mihaino tsara ny fanehoan-kevitra/izay tian'ny mpanjifa ho hita ao amin'ny fivarotana izy ireo. Haingana, misokatra ary mazava ny fifandraisana. Faly be koa ny siny rehetra novidiko teto! Azo antoka fa hanafatra bebe kokoa avy eto amin'ny ho avy. Recommended!🌿 Avy amin'i Stekjesbrief ireo siny miloko amin'ny sary. Ny Hedera koa.hamaky bebe kokoa
Fonosana tsara, nalefa haingana, nifandray momba ny zavamaniry tsy misy intsony ary nanampy tamin'ny fanoloana... zavamaniry azo isafidiananahamaky bebe kokoa
Efa elaela aho no nitady andriambavy mavokely Philodendron sy Philodendron fotsy. Amin'ny alalan'ny... Tao amin'ny instagram dia nikaroka tranokala tsara aho dia tonga nanapaka taratasy. Tamin'ny fandehanana tany amin'ny tranokala sy fangatahana fampahalalana.. Tao no nitsena ahy tamin'ny fomba tena sariaka sy tsara. Nahazo ny Philodendron pp tamin'io andro io ihany! Nampanantena betsaka ny sary, saingy rehefa tonga tao anatin'ny iray andro sy tapany. (Voafono tsara.) Nientanentana aho. Tamin'ny fisalasalana nandritra ny 5 minitra dia nanafatra andriambavy fotsy Philodendron avy hatrany aho. Ary teny 1 ihany no azo eritreretina.. wow.! Wow. Tena faly amin'ny fahatsaran'ny mpanjifa. Ny serivisy haingana sy tsara! Tena hanafatra zavamaniry bebe kokoa eto. Recommended.!! Aza misalasala.!! Ity dia manana serivisy mpanjifa tena tsara ary alefa haingana sy milamina * mazava ho azy fa azonao ampiana fonosana hafanana mandritra ny fotoana mangatsiaka kokoa. Mbola mafana aza ny ahy rehefa tonga ny zavamaniry. Misaotra indray noho ny fanampianao. Serivisy ho an'ny mpanjifa. ary indrindra ny zavamaniry tsara tarehy.hamaky bebe kokoa
Tena fivarotana tranonkala malaza ho an'ny zavamaniry! Fandefasana haingana (1 andro monja amin'ny lalana mankany Belzika) ary tsara kalitao ho azy ireo... Vidiny. Efa nipoitra avy tao anaty vilany ny fakan'ireo zavamaniry roa ireo! Soso-kevitra kely: mety manolotra safidy amin'ny fandefasana entana amin'ny ririnina amin'ny ririnina? Nisy fahasimbana kely ny zavamaniry tamin'ny fahatongavany noho ny hafanana mangatsiaka (fanala amin'ny alina), saingy tokony nanantena aho fa 😄 Tena afa-po aho, tena hanafatra eto indray, ary manoro an'ity fivarotana ity 100%!hamaky bebe kokoa
Nahazo ny baiko aho tamin'io andro io ihany! Tena haingana ary tsy simba mihitsy ny zavamaniry hatramin'ny nanateran'izy ireo ny tenany tamin'ny ahy... toerana. Ny mpiasa rehetra dia tena tsara fanahy, manampy ary tena tsara. Lasa fivarotan-javamaniry ankafiziko mora foana!🌿🌙 Fanavaozana: ny baiko faharoa ary jereo ity pinnatipartita mahafinaritra ity! zavamaniry mahafinaritra ary fanaterana haingana sy mahafinaritra indray. fambolen-kazo tena tiako indrindra🥰hamaky bebe kokoa
Tena afa-po tamin'ny fividianana ny Monstera albo borsigiana variegata fanapahana. Nampahafantarina tsara aho ary... raha mahazo ny fanapahana amin'ny toe-javatra tsara. Be dia be ny fakany ka afaka miaraka amin'ny lehibeny. Tena afa-po!hamaky bebe kokoa
Serivisy lehibe, zavamaniry mahafinaritra, soso-kevitra!
Zavamaniry mahafinaritra, ary serivisy lehibe. Tena faly aho nahita taratasy fanapahana.. tsy ho very ahy intsony izy ireo
Fandefasana haingana ary tonga tsara ny zavamaniry. Misaotra anao!
Fandefasana haingana sy mitandrina, tena faly amin'izany 😊
Na dia very aza ny kaomako voalohany noho ny orinasa paositra tsy nambara, Tamara sy... Taratasy manapaka izay miforitra tsara sy mirindra tsara. Tonga soa aman-tsara ny kaomandy vaovao. Recommended.hamaky bebe kokoa
Zavamaniry tsara tarehy amin'ny vidiny tsara, alefa haingana, fonosina tsara. 10 amin'ny 10!
Tena nanana traikefa tsara aho tamin'ny Cutting Letter! 👍 Kaomandy avy any Aotrisy, tonga tsara ny zava-maniry. Tamara ny... tena manampy! hamaky bebe kokoa
Tena nanampy tokoa i Tamara! Te hividy zavamaniry sasany aho fa tsy nalefa tany UK. Nanampy tamin’ny fandaminana ny fandefasana entana i Tamara, ary... tonga tsara ny zava-maniry feno akora azo averina! Alefa any UK izy ireo izao ary tena manoro hevitra azy ireo aho ☺️hamaky bebe kokoa
Naterina tsara tany Belzika ny baiko voalohany tao anatin'ny andro vitsivitsy. Tena tsara fonosana, hitetika sy ny zavamaniry... nivoaka avy tao anaty boaty tsy simba. Mendrika averina, misaotra!hamaky bebe kokoa
Nanafatra ny talata ary azo androany (sabotsy). Taty aoriana noho ny vahoaka tao amin'ny PostNL noho ny Corona. mbola mijery... toa tsara tarehy sy salama ary azo antoka fa hanafatra matetika kokoa amin'ny Stekjesbrief!hamaky bebe kokoa
Livraison haingana ary zavamaniry voafono tsara! Tsy lafo koa ny zava-maniry ary toa tonga lafatra! tsy misy... fahasimbana na bibikely! Afaka manoro hevitra ny fanapahana taratasy ho an'ny rehetra aho!hamaky bebe kokoa
Nanafatra zavamaniry maromaro taminao aho tamin'ny herinandro lasa teo ary te hampahafantatra anao fa tena faly aho amin'izany 🥰... serivisy tena tsara, fonosana tsara ary tena tsara amin'ny vidiny ️hamaky bebe kokoa
Serivisy ambony sy fanaterana haingana. Tena tsara tarehy ny zavamaniry. Tena faly tamin'izany.
Nahazo baiko omaly hariva. Ary omaly tao! Tena mpandresy! Faly izahay. †
Ny zavamaniry dia tsara ary voakarakara tsara 💚 Tena manoro hevitra aho ny hitetika taratasy! Mirary soa ny rehetra
Tena mahafinaritra ny manafatra zavamaniry an-tserasera? 🤩 Ny olona mahafatifaty amin'ny fanapahana taratasy dia manatitra zavamaniry tsara tarehy avy amin'ny... kely ka hatramin'ny lehibe ary manomboka amin'ny zava-maniry lehibe ka hatramin'ny tapa-kazo! 🌱 Hofenoina tsara izy ireo mba ho voaaro mandritra ny fitaterana 🚚 Aterina mando ihany koa izy ireo mba hijanonana ao anaty baoritra mandritra ny andro vitsivitsy, raha sanatria mijanona alina ao amin'ny paositra! Azo antoka fa manafatra!hamaky bebe kokoa
Fandefasana haingana, ary zavamaniry tsara tarehy sy salama! Na dia nijanona tao amin'ny PostNL nandritra ny faran'ny herinandro iray manontolo aza izy ireo dia nijery... mbola tsara, feno entana ary mando ny tany. Recommended! hamaky bebe kokoa
Mampiasa cookies ity tranokala ity
Mampiasa cookies izahay mba ahafahana miasa amin'ny tranokala sy hahalalana ny fahombiazan'ny tranokalanay. Manaiky ny cookies izahay amin'ny fanohizana ny fampiasana ny tranokalanay. Fikirana cookiesmanaiky aho
Mampiasa cookies ity tranokala ity hanatsarana ny traikefanao rehefa mivezivezy amin'ny tranokala ianao. Amin'ireo cookies ireo, ireo cookies izay sokajiana ho ilaina dia voatahiry ao amin'ny navigateur anao satria tena ilaina amin'ny fiasa fototra amin'ny tranokala izy ireo. Mampiasa cookies avy amin'ny antoko fahatelo ihany koa izahay izay manampy anay hamakafaka sy hahatakatra ny fomba fampiasanao ity tranokala ity. Ireo cookies ireo dia voatahiry ao amin'ny mpitety tranonkalanao raha misy ny fanekenao. Manana safidy hiala amin'ireo cookies ireo koa ianao. Na izany aza, ny fialana amin'ny sasany amin'ireo cookies ireo dia mety hisy fiantraikany amin'ny traikefanao amin'ny fitetezana.
Ny cookies ilaina dia tena ilaina amin'ny fampandehanana tsara ny tranokala. Ity sokajy ity dia tsy misy cookies izay miantoka ny fiasa fototra sy ny fiarovana ny tranokala. Ireo cookies ireo dia tsy mitahiry fampahalalana manokana.
Lisitra miandry - Lisitra miandry Hampahafantatra anao izahay rehefa misy ny vokatra. Mampidira adiresy mailaka manan-kery eto ambany azafady.
mailaka aho raha misy